शरीरमा देखिएका यी १० लक्षणहरु ठूला रोगको संकेत, ढिला हुनुअघि गर्नुहोस् पहिचान !! | सुदुरपश्चिम खबर
शरीरमा देखिएका यी १० लक्षणहरु ठूला रोगको संकेत, ढिला हुनुअघि गर्नुहोस् पहिचान !!
तपाईंले कद बढ्नेबारे त सुन्नुभएको होला तर कहिले मानिसको उचाई नै घटेको बारे सुन्नुभएको छ ? धेरै मानिसहरु यसबारे सोच्दैनन् । तर वास्तवमा हाम्रो उचाई घट्न सक्छ । वास्तवमा यो हड्डीसँग सम्बन्धित एउटा समस्या हो । हामी यहाँ निकै कम व्यक्तिबारे कुरा गर्दै छौं जसको उचाई प्रोटिन वा क्याल्सीयमजस्ता महत्वपूणर् पोषक तत्व नपाएका कारण घट्न सक्छ ।
छालाको स्थितीले पनि मानिसहरुको स्वास्थ्य कस्तो छ, त्यो पहिचान गर्न सकिन्छ । साधारणतया केही मानिसहरुमा डण्डीफोरको समस्या हुन्छ तर छालासँग जोडिएका यस्ता समस्या अस्वस्थ भएको संकेत पनि हुनसक्छ । खराब डाइटले तपाईंको छालाको गुणस्तरलाई पनि खराब पार्न सक्छ । यदि तपाईंको छालामा केही अचम्मको धब्बा देखिएका छन् भने तपाईंले बुझ्नुपर्छ कि केही गलत छ । (रातोपाटी बाट सभार)
शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने ५ योगासनहरु !!